Ogaden News Agency (ONA) – Silsiladda Dahabiga ah ee labaxday” Garab istaag xoreynta Ogadenya” Qeybtii 2aad- By: Xaaji M/rashiid.
Silsiladda Dahabiga ah ee labaxday” Garab istaag xoreynta Ogadenya” Qeybtii 2aad- By: Xaaji M/rashiid.
Posted by Daljir	/ May 27, 2018
Intiina lasocotay Qeybtii hore ee Silsilada Dahabiga ee labaxday “Garab istaag xoreynta Ogadenya” waxaan ku lafo guray xog waran aan u gudbiyay umadda soomaaliyeed iyo dalabkaygii ahaa inay is garab taagaan halganka gobanimodoonka ah ee ka aloosan dalka Ogadenya ee kujira gacanta guumaysiga Itoobiya. Maanta waxay qormadani ku wajahantahay bulshowaynta Soomaaliyeed ee dalkooda lagu guumaysto anigoo ka amba qaadaya maah’maahdii soomaalida ee aheyd, Ruqo ninkii lahaa dabada kaga taaganyahay makacdo!.
Intaana gudaha usii galin qoraalka aan umahad naqo Rabigay Cazza Wajalla inuu inagu daray daraadeed inta duco qabayaasha ah ee taageerta halganka xaqa ee kasocda mandiqada Ogaden. Duco qabyaashu waa kuwa ka soo horjeeda sii joogitaanka askarta guumaysiga ee Gobolka. Waa kuwa hadh iyo habeemba taageerada la garab taagan jabhadda xoreynta ogadenya ee JWXO. Waa kuwa ka dhiidhiyay gabood falda aan kala sooca lahayn ee lagu hayo dadka shacabka een is difaaci kari, Meesha inkaar qabayaashu ay yihiin kuwaa caksikooda!.
Dadwaynaha soomaalida Ogadenya waa umad uu ilaahay siiyay karaamo iyo haybad uu cadowgeedu kaga cabsado. Waa umad aan waxba u arag cadowgeeda xoogga iyo awooduu doonaba ha sheegtee. Waa umad geesi ah oo doorbidday inay halgan ku noolaato badalkii ay gumaystoow mood odhan lahaayeen ama madaxa hoos ugu dhigi lahaayeen. Gumaystaha laftiisu wuxuu ka mkhraati kacayaa inay arintaasi ay xaqiiq tahay, farahana uu kaga gubtay haysashada dadkaas.
Hadaan hoos ugu sii yara dhaadhaco hadafka qoraalka waxaan doonayaa inaan khudbad kooban u gudbiyo soomaalida ogadenya ee dagaalka mudada dheer kula soo jirtay guumaystaha Abasiiniya ee garaadka iyo aqoontiiba laga madoobeeyay. Hadaan kasoo bilaabo taariikhda dhow waxaa 1994 siyaasadii dalka isku hardiyay saraakiisha sare ee jabhadda Xoreynta Ogadenya ee JWXO iyo Ururka Woyaanaha ee lagu soo gaabiyo TPLF.
Run ahaantii dadka gobolku wuxuu waqtigaas kujiray marxalad qalafsan oo aheyd iyadoo dadwayne farabadan oo jamhuriyada soomaaliya qaxooti ku ahaa ay dib ugu soo laabteen wadanka isla markaana ay u yimaadeen dadkoodii oo wali uu guumaystuhu xoog iyo cabdhis ku haysto. Hantida kaliya ee ay dadkaasi lasoo laabteen waxay aheyd aqoon iyo maskax furfuran ileen waa dad kusoo noolaa dal ay xornimo kajirtee.
Waxay usha u qabteen bulshadoodii iyagoo u bilaabay duruusta ku saabsan qiimaha ay leedahay xorriyaddu iyo sida ay lagama maarmaan u tahay inay dadku indhaha kala furaan isla markaana eegaan hareerahooda iyo sida bulshooyinka caalamku unoolyihiin. Waxay tuseen inayna noloshu ahayn kaliya in Geel, Adhi iyo Lo’ la dhaqdo, balse ay jirto qaab nololeed kale oo kudhisan dawladnimo, Calan babanaya iyo horumar aad adigu iska leedahay. Shacabkii wuxuu qorshahaas kaga jawaabay aqbal iyo inuu uriyaaqo arimahaas. Waxay ciidamadii halganka isla daba taageen Caano, Hilib iyo wax kasta oy awoodeen.
Waxaa lasoo gaadhay sanadkii 2007 oo ahaa sanadkii Tacsida iyo muragadu ay ku habsadeen Taliskii Dhiigyab Meles Zenaawi, kadib markii ay gabi ahaamba fashilmeen qorshayaashii shidaal soo saarista ee Gobolka. Waa sanadkii uu guumaystaha iyo dunida inteeda kaleba ogaadeen cidda dhabta ah wadanka iska leh la’aanteedna aan shidaal laga baadhi karin, lagana soo saari karin! Dhanka kale waxaa iyaduna guul aheyd in hamigii shacabku kor ukacay kadib markay yaqiinsadeen inay leeyihiin ciidan karti leh oo la isku haleyn karo.
Taasi waa mida guumaystaha ku kaliftay inuu yagleelo maleeshiyo calooshood ushaqeysta ayaal ah oo bulshada laga dhex ugaadhsaday. Nasiib darro waxaa arintii u dhago nuglaaday bulshada qeybteedii laga roonayaasha ahaa ee balwadda iyo mukhadiraadkana caanka ku ahaa. Waxaa lagu qulaamiyay awaamir halis oo xataa guumaystaha laftiisu isu quudhi waayay inuu foliyo tasoo aheyd inuu nin waliba reerkooda kaga bilaabo dilka iyo dhaca, waxayna u fuliyeen hawshii loo diray siday aheyd!.
Dadkayga qaali ahi waa inay is waydiiyaan marxaladda hadda lamarayo sidoo kalana ay dib u jaleecaan waqtiyadii lasoo maray. Waxaan idin leeyahay waad soo aragteen dil, dhac, bahdil iyo xidhay. Wax intaa kasareeya oo la idinku sameyn karaana majiraan ee bal horta taa ogaada. Dhinaca kale waxaa muuqata inuu cadowgiinii jabay oo uu la’yahay meel uu wax qabto, kadib markii gondihiisa hoostooda balaayo ka kacday. Waxaa intaa dheer isbadalo waawayn oo qaarna dhaceen kuwo kalana lasugayo. Meesha waa la wada dulman yahay ee kaligiin ma’aha oo xataa kuwo madax sheeganaya ayaa dulman oo hoosta ka ooyaya!.
Nuxurka Silsiladda dahabiga ah oo ah “Garab istaag xoreynta Ogadenya” waxaan si gaara ugula hadlayaa Aqoonyahanka iyo Wagaradka wadanka udhashay ee halganka xaqiisii ka gaabiyay iyagoo marmarsiiyo ka dhiganaya wax’aan qiimo wayn lahayn. Runtu waxay tahay dalkii ay aqoontiinu kamuuqan lahayd waa la haystaa! Cidda maamuleysa waa jaahiliin iyo mooryaan aan dad iska daayi xoolo lagu aamin Karin. Sidaa darteed dhamaan bulshada soomaalida ah ee Gobolka waxaa ku waajibay inay halganka is garab taagaan.
Waxaa jira kooxo hada uun IL kaliya ku arkay dulmiga dadka lagu hayo, balse maba xumee ha ogaadeen inayna Naari meel qabow lahayn. Gumayste haduu mid kaa badalo kukale oo isaga ushaqeeya umbuu kuu keeni, kamana suurta gasho inuu cadaalad soo kordhiyo. Shaqsiga Soomaaliga ah ee itoobiyaanimo ku doodaya waxaan waydiin lahaa horta dastuurka itoobiya qof soomaali ah xaq masiinayaa? jawaabta idinkaan idiin daayay, laakiin xikmad baa tidhaaha- Soomaalida itoobiya ma wax suurto galabaa!! Walaalayaal waa run weedhaasi oo ismaba qaban karaan soomaali baan ahay itoobiyaana waan ahay, hadiise ay dhici karto waa in marka hore ay Dabka iyo Baasiinku meel kuwada kulmaan!!.
Waxaan si kal iyo lab ah usoo dhaweynayaa kacdoonka ka curtay Ogadenya ee lagu minja xaabinayo Taliska baadilka ah iyo kabo qaadyada ushaqeeya. Sidoo kale siyaasadda halganku intaan ka warqabo waxay soo dhaweynaysaa cid kasta oo qori kutuurta guumaystaha Woyaanaha ee doolka ah. Si kastaba ha ahaatee waa waqti ku haboon inay cid waliba ay qeyb qaadato isdabaraacinta woyaanaha waana sida kaliya ay xaqeeda maqan ku heli karto.
Gabagabadii sidaad ogtihiin guumayste naxariis lagama sugayo, waxa hadeer uu dadwaynaha ree ogadenya kala kulmayaana waa mirjin iyo dabitaan oo kadhigan galgalashadii guumaystaha ee yaan loo qaadanin inuu noolyahay.